I-Multimedia All-in-One whiteboard FC-8000 yibhodi edibeneyo ehlakaniphile, edibanisa nebhodi esebenzayo, ikhompyuter ye-OPS, izithethi, isibonisi, isilawuli esisembindini esismart, i-remote-in-one ene-mic kunye netreyi yosiba kwisixhobo esinye esihlakaniphile. Ukusebenza nalo naluphi na uhlobo lweprojekti, iyathandwa kwaye isetyenziswa ngokubanzi kumagumbi okufundela emultimedia, amagumbi oqeqesho kunye namagumbi eebhodi zenkomfa.
I-EIBOARD Multimedia All-in-One whiteboard 82inch, njengemodeli yeFC-8000, idibanisa zonke izixhobo zokufundisa eziyimfuneko ezifunwa ngutitshala kwigumbi lokufundela, ezidibanisa ne-82” esebenzisana nebhodi ye-smart, ikhompyutha ye-OPS, isilawuli esiphakathi, izithethi, imakrofoni engenazingcingo. kunye zonke-in-enye kude kwisixhobo esinye smart. Kwenza ukufundisa kube lula yaye kuphumelele ngakumbi.
* I-EIBOARD Multimedia All-in-One whiteboard 82inch idityaniswe kakhulu kunye noyilo lwe-in-one.
* Isebenzisa uyilo oludityanisiweyo lokudibanisa olungenamthungo lube luhle ngakumbi kwaye lube lula.
* Ngofakelo olulula kunye nokusebenza.
* Ngokuxhonywa eludongeni kunye ne-in-one eyilwe yonke, inika utitshala indawo eyongezelelekileyo yokujikeleza ukuququzelela ukufundisa.
* Ibhodi ine-infrared 20-point touch, enokuthi ihlangabezane nokubhala ngaxeshanye kwimfuno yabantu abaninzi.
• Ichasene nokungqubana kunye nokuchasana nokukrweleka okusekwe kwisixhobo sebhodi yobuchwepheshe obuqengqelekayo obubandayo.
* Ukuhlengahlengiswa kobukhulu obuninzi kwamkelwe ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zeemeko zokufundisa ezahlukeneyo.
Iphezulu kuneebhodi ezisebenzisanayo ngokubanzi, i-EIBOARD all-in-one interactive whiteboard FC-80000 idibanisa zonke izixhobo zokufundisa eziyimfuneko utitshala azifunayo kwigumbi lokufundela, ezidibanisa nebhodi esebenzayo esebenzayo, ikhompyuter ye-OPS, isilawuli esiphakathi, izithethi, imakrofoni engenazingcingo. kunye ne-remote yonke kwisixhobo esinye esihlakaniphile.
I-EIBOARD all-in-one interactive whiteboard yenza ukufundisa kusebenze ngakumbi kwaye kube lula.
1. Udibaniso oluPhakamileyo kunye neNdleko yokuGcina
Idityaniswe zonke izixhobo zokufundisa eziyimfuneko kwisixhobo esi-1, kubandakanywa ibhodi ye-smart esebenzisanayo, ikhompyuter ye-OPS, isilawuli esiphakathi, izithethi, imakrofoni engenazingcingo kunye ne-remote-in-one.
Uyilo olusebenziseka lula longeza iziphumo zokufunda kwaye lwenze ukonga iindleko.
2. Ukuqalisa ngokukhawuleza kunye nokuCima
Isitshixo esinye sokuqalisa okanye ukuvala isixokelelwano esipheleleyo, kubandakanywa zonke-in-one ibhodi emhlophe kunye neprojekti edibeneyo, kulula ukuba ootitshala basebenze kwaye balondoloze ixesha.
3. Multi-touch kunye Dry-erase Board Surface
Ngamanqaku angama-20 ukubamba, ixhasa abasebenzisi abaninzi ukuba basebenze ngexesha elinye.
Ngomphezulu ozinzileyo wePolyvision e3 weceramic, ixhasa i-inki ephawulwayo ngokulula ukubhala kunye nokucima.
4. Ubungakanani beBhodi yoLungiso
Ubukhulu obufumanekayo ngokomgangatho ngama-82 intshi, 96inch kunye ne-140 intshi. Obunye ubungakanani bunokwenziwa ngokweebhodi ezifunekayo.
Iimpawu eziphambili ze-EIBOARD Multimedia All-in-one Whiteboard
②IBhodi yokuBhala ngobuchule
③ Amanqaku angama-20 ukubamba
⑦ Ulawulo olusembindini
Ngaphambili: Multimedia Yonke-kwinye FC-7000
Okulandelayo: Interactive Whiteboard
Igama lemveliso Multimedia zonke-in-enye Whiteboard
Simo Umzekelo FC-8000
Ibhodi eSebenzayo Umbala Isilivere
Izinto eziphathekayo Isakhelo seAluminiyam yeAluminiyam
Iteknoloji Itekhnoloji ye-infrared
Indawo yokuchukumisa 20 amanqaku touch
Ixesha lokuphendula ≤8ms
I-PC eyakhelwe-ngaphakathi Motherboard IBanga loShishino H81 (H110 ngokuzikhethela)
ICPU Intel I3 (i5/i7 ngokuzithandela)
i-RAM 4GB (8g uyazikhethela)
I-SSD 128G (256g/500g/1TB ngokuzithandela)
WiFi Ibandakanyiwe 802.11b/g/n
OS Faka kwangaphambili Win 10 Pro
Isithethi Isiphumo 2*15Watt
UMlawuli oPhakathi oSmart Iphaneli yokulawula 8 Amaqhosha cofa iqhosha
Ukuqala ngokukhawuleza Iqhosha elinye ukunika amandla/ukucima iPC kunye neprojektha
Ukhuseleko lweprojektha Isixhobo sokulibaziseka kombane weprojektha
Isibonisi Ikhamera yoxwebhu CMOS
I-Pixel 5.0Mega (8.0 Mega uyazikhethela)
Skena ubukhulu A4
Amandla Ukusetyenziswa kwegalelo 100 ~ 240VAC,190W
Izibuko USB2.0*8,USB3.0*2,VGA kwi*1,Umsindo kwi*2,RJ45*1,irimowuthi ye-infrared kwi*1,HDMI kwi*2,RS232*1,Audio out*2,HDMI ngaphandle*2 ,Bamba i-USB*2,VGA ngaphandle*1
2.4G + Ukude Isalathisi seLaser + impuku yomoya + isilawuli esikude + Imakrofoni engenazingcingo
Inokulawula ivolyum, ukujika kwephepha lePPT;
Unokufikelela kwi-Intanethi ngeqhosha elinye;
Ukufundisa okude kunye nenkcazo.
Izincedisi 2* iipeni, 1*Isalathisi, 2*Intambo yamandla, 1*RS 232 intambo, QC kunye nekhadi lewaranti
Iwaranti Unyaka omnye
Isoftware I-software ye-Whiteboard*1, i-Visualizer software*1, isoftwe yolawulo oluphakathi*1
Ixabiso leBhodi eSebenzayo